मानिसको शरीरमा अक्सिजनको तह कति हुनुपर्छ? – Dullu Khabar
सुर्खेत । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जटिल चरणमा जाँदा अक्सिजन कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । अक्सिजन कम हुँदा निश्चित उपचार सुरु गर्नुपर्ने बताइएको छ । “त्यसै कारण कोरोनाभाइरस पोजेटिभ हुनेबित्तिकै हामी बिरामीलाई शरीरमा अक्सिजनको तह नाप्न सिकाउने गरेको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदीले बताए ।
सामान्यतया पल्स अक्सिमिटर भन्ने उपकरणले अक्सिजन नाप्दा तह ९५ देखि ९६ हुन्छ। “तर धेरै मोटा मान्छेहरू अथवा फोक्सोको, दमको रोग भएका मान्छेहरूमा पहिले नै अक्सिजनको मात्रा पल्स अक्सिमिटरले कम देखाउन सक्छ। उहाँहरूका लागि सामान्य अङ्कनै ९२–९३ हुन सक्छ। कसैको ९० मात्र पनि हुन सक्छ,“ सुवेदीले भने।
अरू कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएका मान्छेमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा अक्सिजनको मात्रा घटेर ९२ वा त्यो भन्दा कम भए अस्पताल जान र उपचार गराउन डा. सुवेदी सुझाव छ ।
सामान्य अवस्थामा अक्सिजन ९५–९६ भएको व्यक्तिमा ९३ तिर देखियो वा घट्न थालेको सङ्केत देखियो भने चारदेखि पाँच घण्टामा नाप्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कोरोनाभाइरस महामारी चलिरहेको भएपनि अत्यावश्यक नभएसम्म अस्पताल नजान चिकित्सकहरूले सुझाइरहेका छन्। चाप धेरै भएकाले सामान्य अवस्थाका कोभिड बिरामी समेत घरमै बसिरहेको विवरणहरू आइरहेका छन्।
“घरमा बसेर अस्पतालमा दिन सकिने निश्चित उपचार दिन मिल्दैन। अर्को कुरा त्यो अवस्थामा पुगेपछि बिरामीलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ र अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्यो भने घरमा थोरै अक्सिजन लगाएर मात्रै माथि ल्याउन सकिँदैन। अस्पतालमा एक पटकमा अलि धेरै अक्सिजन दिन मिल्ने व्यवस्थाहरू छन्,“ उनले भने।
यसको ’खासै ठूलो’ उपाय केही पनि ’नभएको’ सुवेदी बताउँछन्। ’’सकेसम्म फोक्सो स्वस्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पहिले देखिनै तपाईँले तयारी गर्ने हो। चुरोट खाइरहनुभएको छ भने छाड्ने। स्वास्थ्यकर बानीबेहोराबाहेक अन्य केही उपाय छैन।“
अक्सिजन कम हुन लागेको सङ्केत देखिए सुत्दा घोप्टो पर्नु राम्रो हुने उनको सुझाव छ। “गाह्रो भए कोल्टे पर्ने। सकेसम्म उत्तानो परेर नसुत्ने। त्यो विचार गर्न सकिन्छ। त्यसले फाइदा गर्छ भनेर देखाएको छ। त्यो चाहिँ प्राय अक्सिजन घटिसकेका मान्छेलाई हामी सुझाउँछौँ। अक्सिजन घटेको जस्तो आफूलाई लाग्छ भने त्यस्तो अभ्यास गर्दा हुन्छ,“ उनले भने।
“कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुँदा पनि गर्ने त्यही नै हो,“ उनले भने। “झोल कुरा, पानीको मात्रा बढाउँदा राम्रो हुन्छ। मद्यपान गर्नु हुँदैन।“
शरीरलाई विशेष खाना खाँदा अक्सिजन बढिरहन्छ भन्ने कुनै अध्ययनले नदेखाएको उनी बताउँछन्। (विविसीकाे सहयाेगमा)
अक्सिजनकाे मात्रा ९० भन्दा कम भए तुरून्तै अस्पताल जानुहाेस्, घरमै चेक गर्न सकिन्छ अक्सिजन मात्रा
Tags: काेराेना कहरस्वास्थ्य टिप्स